Harrachov iyo qorraxda 14.11.2016. Harrachov (Harrachsdorf) waa magaalo iyo munaasabad weyn oo ku taala Austria Giant Mountains. Waxay ku taal buurta Devil ee dooxada webiga Mumlava. Maamul ahaan waxay hoos imanaysaa gobolka Liberec, Degmada Semily. Xuduudda magaalada ayaa si toos ah u dhow jidka Poland, kaas oo ay ku xiran tahay gaadiidka wadada ee muhiimka ah.
On site ee Harrachov maanta wuxuu ahaa at 17. qarnigii aasaasay tuulada Dörfl, oo ku taalla 18. qarniyadii hore waxaa loo bedelay milkiilayaasha guryaha degaanka Harrachov. HarrachovAsal ahaan qoyska qoysaska reer Czech, ayaa magaciisa ka soo qaada meel koonfurta Bohemia (de Horach). Hab-nololeedka deggenayaasha maxalliga ah ayaa ahaa ka dibna quraarad dhaqameed, oo ku wareegsanaa Harrachov tan iyo 14. qarnigii. Nidaamka muraayadda Harrachov ee Novosad ayaa la aasaasay 1712, waana muraayadda labaad ee ugu caansan dalka Czech.
Glassworks lahaa ilaa qoyska 1946 Harrach, ka dibna waxa la wareegay gobolka, kaas oo iibsaday in milkiilaha gaarka ah 1993. Harrachov xuduudaha maanta ee xuddun 50. sano 20. qarnigii, markii la LABAGEEDI by World Cusub, iyo Placer (ka hor 14 1959. February), Poland (Silesia, siday u kala horreeyaan) Mýtiny. ciyaaraha Winter in Harrachov bilaabay wax yar ka dib Tirada ku Jan Harrach keenay barafka si Bohemia (ee Century 19.). A "Association Sports Association" waxaa lagu aasaasay 1908. Markii ugu horeysay ee la yidhaa 'Harrachov' ayaa caan ku noqday magaca 1920. In 1923 ee Harrachov qabtay tartanka ski caalamiga ah marka hore, kuwaas oo goob joog ka ahaa ku orda ugu fiican ka dalal badan oo Yurub ah, ka Maraykanka. Tan iyo 1954, Rakaabka Caalamiga ah ee Ski ayaa si joogto ah u dhacay.
1980, ayaa lagu dayactiray aagga barafka lagu ciyaaro iyo buuraleyda gogosha, oo leh buundada sare ee lagu ciyaaro kaymaha - buundada K-185. 90. Dhaqdhaqaaqii hore ee Čertova ayaa dib loo dhisay. Kursigu wuxuu bixiyaa 130 kursi afar-kursi ah iyo mitir dheer oo mitirka 1303 ah oo loogu talagalay daqiiqado 8,7. Laga soo bilaabo saldhigga hoose (665 m) wuxuu dhaafayaa mitirka 357. Awooda gaadiidka waa 1782 qofkasta. Waxaa ka mid ah meelaha soo jiidashada dalxiiska ee ugu cusub oo ay yihiin jidka bobsleigh.